ဟောင်ကောင်ရှိလူငယ်များမှ cyberpornography အသုံးပြုခြင်းသည်အချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ (၂၀၀၇) - Your Brain On Porn
PDF - လေ့လာမှုအပြည့်အစုံ
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2007 Aug;36(4):588-98.
lam သမဝါယမ, chan က DK.
စိတ်ပညာဌာန, ဟောင်ကောင်, ဟောင်ကောင်, တရုတ်တရုတ်တက္ကသိုလ်။
ဒီလေ့လာမှုကဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ငယ်ရွယ်တရုတ်ယောက်ျားတစ်နမူနာအကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်နှင့်၎င်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများပျံ့နှံ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ 229 ပါဝင်သူတစ်ဦးစုစုပေါင်း၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်, သက်တူရွယ်တူများနှင့်မိဘ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, အတွေ့အကြုံမှပွင့်လင်းခြင်း, လိင်-related သဘောထားတွေအမျိုးမျိုးတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့မေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့သည်။ ရလဒ်များအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ဘုံကြီးနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရွယ်တူချင်းဖိအားမှသက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပို. အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရှိသည်သတင်းပို့တဲ့သူသင်တန်းသားများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဆီသို့အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုလိုကျ၏အတိုင်းအတာများနှင့် proclivities အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အယူအဆရေးရာနှင့်ဤတွေ့ရှိချက်များ၏သက်ရောက်မှုကိုဆှေးနှေးနေကြသည်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်ကိုလက်မခံခြင်းနှင့်လိင်အလိုလိုအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမည်ဟူသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နောက်ထပ် Braun-Courville နှင့် Rojas (2009), ဘရောင်းနှင့်သည် L'Engle (2009), Lam နှင့်ချန်း (2007), နှင့်ပေတရုနှင့် Valkenberg (2006a, 2007, 2008b) ကထောက်ပံ့ထားရသည်။